Ummanni Oromoo ummata damee kuush keessaa tokko yoota’u ummata seenaa bara dheeraa qabuufi seenaa ofii bifa barreefamaatiin osoo hin taane fookiloriitti fayyadamuun afaaniifi gochaan dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa tureedha.Akka Asafaan (2009,12) ibsutti,“afaanota Afrikaa keesatti dubbatamu keessaa Afaan Oromoo afaan Arabaa,
Apr 07, 2010 · Hidhaa fi Saamichi Ummata Oromo Irraa Akka Dhaabbatu Gaafatame! (Madda Oduu ABO/MOA/ Adelaide, South Australia, 27 Ebla 2010) Hidhaa fi Saamichi ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru, naannoo Gaanfa Afrikaa jeequmsa olaanaaf kan saaxilu waan ta’eef naga jaalattooti addunyaa mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhan gaafatame.
J/ Tullun Oromummaa dagaaggisee, ummata isaa fi biyya isaa bilisa baasuuf roga hundaan qabsaawee darbeera. Gooti Kun, akuma gootata Oromoo biraa, seenaa fi aadaa ummata isaa badii irraa olchuuf, du’a, rakkina fi hidhaa utuu hin sodaatin qabsaaweera. Qabsoos Kan eegale akka nama tokkootti.
/ / Kitaaba seenaa oromoo pdf Kitaaba seenaa oromoo pdf Name: Kitaaba seenaa oromoo pdf File size: 212mb Language: English Rating: 7/10 Download Seenaa Ummata Oromoo Pdf Free Software. Seensa kitaaba kanaa keessatti seenaa isaa akka armaan gadiitti odeessee jira.
Apr 12, 2014 · Guyyaa Goototaa Oromoo. Ebla 15, 2014. Gooti Oromoo nama kutannoo fi wareegama saatiin jireenya saba Oromoo keessatt jijjiirama argamsiisu yk argamsiisuuf dabarsee of kenne. Gooti Oromoo didhaa fi sossobbiin karaa irraa kan hin ceesifne, jagnummaa, gamnummaa fi arjummaan beekamu. Gooti Oromoo, jaalbiyyaa dantaa dhuunfaa kaasaa sabawaaf wareegu.
seenaa Aadaafi Afaan isaanii guddifachuun mirga isaanii ta’ee jira. Gaaffiifi dheebuu Ummata Oromoo kan ta’e gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka deebii argatu ta’ee jira. Giddu galli Aadaa Oromoo Bakka Dur Uummanni Oromoo Masqala itti gubaa turetti deebi’ee ijaaramuun isaa injifannoo qabsoo Dh.D.U.On Uummata Oromoo waliin ta’uun Seenaa Qabsoo fi Seenaa mana hidhaa Qabsoo ummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee Waldaan Wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti laallamuu isaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti ...
May 27, 2015 · Waamicha ilmaan Oromoo isiniif godhaa jiru dhagahuu diddaan badii irratti badii dabalachaa kan deemtan yoo ta’e, bifa kamiinuu murtii ummata Oromoo jalaa kan hin miliqine ta’uu keessan akka beektan isin hubachiifna. Kanaaf jecha yeroon otoo hin darbiin akka mooraa qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatan waamicha isiniif taasifna.
KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO. Aadaa kanaafi kana fakkaatan ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa. Godaansa Oromoo Jaarraa 16ffaan duratti Ummata akka waan hinsossoonee kana akka garaa, dhagaa ykn galaanaa godhanii fudhachuun hin tahu.